Izindaba - Funda Kabanzi Ngendaba kaMeari
I-Hangzhou Meari Technology Co, Ltd. ingumkhiqizi ohamba phambili emhlabeni wemikhiqizo yasekhaya ehlakaniphile. UMeari ugxile kubuchwepheshe obuthuthukile obufana nobuchwepheshe bevidiyo, i-AI, i-IoT, amapulatifomu amafu. Njengenkampani ehlanganisa i-R & D, ukumaketha nokuthengwa kwempahla, uMeari unikeza izixazululo zevidiyo ezihlakaniphile zasekhaya ezilodwa.
IMeari Technology izibophezele ekwakheni nasekukhiqizeni imikhiqizo yevidiyo ehlakaniphile nokuzama ukuhlinzeka amakhasimende omhlaba wonke ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme yezinga eliphakeme, izixazululo zokuphepha ekhaya ezinokuma okukodwa, kanye nezinsizakalo ezihlelwe kahle kakhulu.
Sigxila ekuthuthukisweni komkhiqizo nakubuchwepheshe obusha futhi sethula uhla oluphelele lwemikhiqizo yevidiyo ehlakaniphile yasekhaya, kufaka phakathi amakhamera asendlini, amakhamera wangaphandle, amakhamera okutsheka, amakhamera webhethri, izinsimbi zomnyango ezihlakaniphile, amakhamera we-floodlight, ukuqapha kwezingane, ne-module yevidiyo ye-IoT.
Emuva ngaleso sikhathi sasiseyiqembu elincane labantu abayishumi nambili, futhi sasakha umkhiqizo wethu wokuqala ehhovisi lethu laseHangzhou.
Njengamanje, sinamakhulu abasebenzi, futhi sakha amagatsha eYurophu. Imikhiqizo nezinsizakalo zethu zihlanganisa amazwe nezifunda ezingaphezu kuka-150, futhi zingene ezitolo ezinkulu eziningi ezaziwayo eYurophu naseMelika, njengeWalmart, iBest Buy, i-Home Depot, iKingfisher, neMediaMarkt. Ukuthunyelwa kwaminyaka yonke kufinyelela emashumini ezigidi, kukhonza amashumi ezigidi zamakhasimende emhlabeni jikelele.
Ithimba elisungula iMeari Technology lakhiwe ngochwepheshe abaphezulu be-R & D, ochwepheshe bezebhizinisi, kanye nochwepheshe bezokuhlinzeka abanolwazi olunothile emkhakheni we-smart home, IoT nobuchwepheshe bevidiyo cishe iminyaka engamashumi amabili. Amalungu ayisisekelo avela ezinkampanini ezihola phambili kwezokuphepha, i-IoT ne-AI.
Ngemuva kweminyaka yentuthuko, uMeari wakhe iqembu elinamandla le-R & D. Njengamanje, ngaphezu kuka-40% wabasebenzi benkampani bavela emnyangweni we-R & D, kufaka phakathi ukwakheka kwe-graphic interface, ukwakhiwa kwezimboni, ukwakheka kwesakhiwo, ukwakhiwa kwehadiwe, isoftware efakiwe, i-App, ipulatifomu lamafu neseva, njll.
IMeari yasungulwa eHangzhou.
Qinisekisa ku-ISO 9001 naku-ISO 14000.
Imikhiqizo ingene ezimakethe zaseYurophu naseNyakatho Melika.
Imikhiqizo ifake amapulatifomu okuthengisa afana neWalmart neKinfisher.
Uqale ukungena ezimakethe zase-Australia, eJapan naseKorea.
Kuphumelele isitifiketi sikazwelonke sobuchwepheshe obuphezulu.
Ibizwe ngezinkampani zeForbes Top 100 AIoT Companies.
Kwavulwa izimakethe eNingizimu Melika, eningizimu-mpumalanga ye-Asia naseNdiya.
Kukhishwe uhla oluphelele lwemikhiqizo yevidiyo ehlakaniphile, lapho imikhiqizo enikwe amandla ngebhethri ithengiswa kahle e-Amazon.
Kusungulwe igatsha eYurophu.
Ukuthunyelwa minyaka yonke kungene phambili embonini.
Iyaqhubeka ukukhipha imikhiqizo yamandla webhethri yesizukulwane sesibili nama-Baby Monitors.
Wina i-Evergreen Award ephuma ku-Financial Magazine.
Imikhiqizo yochungechunge lwe-Optics iwine i-Red Dot Award kanye ne-IF Design Award.
Umsebenzi wethu & Umbono
Injongo kaMeari: Nikeza imikhiqizo yasekhaya ehlakaniphile emangaza amakhasimende.
Umbono kaMeari: Yiba yinkampani yezobuchwepheshe enokuncintisana kwemakethe yomhlaba.